Global Voices teny Malagasy » Ny football, Fampiraisana Ny Fiaraha-Monina Ao Nizera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Desambra 2013 0:51 GMT 1	 · Mpanoratra Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Nizera, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Tanora
Firenena manana velarantany indroa avo heny noho i Frantsa i Nizera , ahitana faritra valo sy foko enina samihafa. Izay ihany koa no firenena manana famantarana ny fampandrosoana ny mahaolona maivana indrindra tamin'ny 2012. Ireo kasinga samihafa ireo no mety hampalemy ny rafi-piaraha-monina noho ny fitomboan'ny hantsana (ara-toekarena) sy ny fahasamihafan'ny mponina. Ny fanatanjahantena matetika no fitaovana idealy ho fanamafisana ny fifandraisana ara-tsosialy ao amin'ny fiaraha-monina ao Nizera. Izany no antony mahatonga ny Kaominina ao Kalfou ao amin'ny departemantan'i Tahoua  manomana fifaninanana football isan-kerintaona ihaonan'ny ekipa samihafa ao amin'ny departemanta.
Fifaninanana ao aminn'y departemantan'i Tahoua, Nizera, nahazoana alalana avy amin'ny tetikasa Mapping for Niger
Nandray anjara tamin'io fifaninanana io i Hamzajaba, mpandray anjara amin'ny tetikasa Rising Voices Andao Hataontsika Sarintany i Nizera , ka nitantara  :
Nokarakarain'ny olona avy ao amin'ny tanànakely ambanivohitra antsoina hoe “Guidan Toudou”. Ahitana tanàna kely valo (8) zaraina ao anaty vondrona roa A sy B ity fifaninanana ity. Ny vondrona A dia ahitana an'i Guidan Toudou, Alibou, Toudouni ary Tounga ary ny vondrona B dia ahitana an'i Samo, Karaji Sud, Guidan Gara ary Galmawa. Ny famaranana dia nifanandrinan'i Guidan Toudou sy Karaji Sud izay nandresen'i Guidan Toudou tamin'ny isa 3 noho ny tsy misy noho ny tsy fanatongavan'i Karaji Sud. Nahafinaritra tokoa ny fizotran'ny fifaninanana, feno fair play (lalao madio) ka tratra noho izany ny tanjona. Maro ny tanora nifanena tamiko, eny fa na ireo niara-nianatra tamiko tany amin'ny kolejy aza. Guidan Toudou no nahazo ny amboara ary 70 000 FCFA ny loka azony; faharoa i Karaji Sud nahazo loka 40 000 FCFA ary fahatelo i Galmawa nahazo 20 000 FCFA. Nahazo baolina tsirairay avokoa ny ekipa mpandray anjara rehetra.
Ny departemantan'i Tahoua, nataon'ny tetikasa Mapping for Niger an-tsarintany
Avoahy eto ny sarintany lehibebe kokoa 
Nankafizin'ny Nizeriana hatrany ny football. Mpilalao football taloha ny iray amin'ny olona fanta-daza indrindra any Nizera, Moussa Kanfideni , izay kapitein'ny ekipam-pirenena tamin'ny taona 80. Tsy maty intsony ny anarany tamin'ny fananganana foibem-pampiofanana ara-teknika voalohany ho an'ny sangany eo amin'ny football rahatrizay, ny Souley Académie Sports (SACA-Sports). Ousmane Keïta manazava ny anjara toeran'ny ivon-toeram-pampiofanan'ny football  amin'ny ankapobeny eo amin'ny fitaizana ny tanora nizeriana :
Mazava ny tanjon'ny akademiam-panatanjahantena Souley : tsy hoe mameno ny banga amin'ny fampiofanana ny tompondaka ihany, fa amin'ny manampahaizan'ny ampitso. Amin'ny teny hafa, mikendry ny hamolavola olom-pirenena maodely, novononina hiatrika sakantsakana sy ny fifaninanana ny ivontoerana.
Fifaninanana football tao amin'ny departemantan'i Tahoua, Nizera. Nahazoana alalana avy amin'ny tetikasa projet Mapping for Niger
Misy ny akademia hafa najoro, tahaka ny Atcha académie , mikendry ny hamolavola ny tanora nizeriana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Tahaka izany ihany koa, vao najoro tao avaratr'i Niamey, renivohitr'i Nizera, ny ivontoerana teknikan'ny Federasiona nizeriena Football (FENIFOOT). A Niamey manazava ny tanjon'io ivontoerana io  :
Miisa 52 ny fitambaran'ny tanora manantalenta, latsaky ny 15 taona, notsongaina voalohany mialoha ny fifantenana farany manerana ny firenena. Kendren'i Nizera ny ivoahan'ireo tanora ireo ho voavolavola hananganana ny ekipam-pirenena hisolo tena ny firenena amin'ny Fiadiana ny amboaran'i Afrika latsaky ny 17 taona kasaina hotontosaina any Niamey amin'ny 2015.
Fitaovana mahomby hampiraisana hina sy hanentanana ny firenena ihany koa ny ekipam-pirenena. Ity ny hafatra ataon'ny mpilalao baolina nizeriana amin'ny alalan'ny lahatsary hanairana ny olona hiady amin'ny hanoanana ao Nizera:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/05/55241/
 Andao Hataontsika Sarintany i Nizera: http://mappingforniger.wordpress.com
 Avoahy eto ny sarintany lehibebe kokoa: http://www.openstreetmap.org/?mlat=14.839&mlon=2.153&relation=3219403#map=6/14.839/2.153
 Moussa Kanfideni: http://en.wikipedia.org/wiki/Moussa_Kanfideni
 ny anjara toeran'ny ivon-toeram-pampiofanan'ny football: http://www.republicain-niger.com/index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=4455
 Atcha académie: http://www.atcha-academie-du-niger.com/lacademie/presentation
 manazava ny tanjon'io ivontoerana io: http://news.aniamey.com/h/7487.html